EPlus ekwuputala ụlọ ọrụ kredit ọhụrụ
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » EPlus ekwuputala ụlọ ọrụ kredit ọhụrụ
ePlus inc., onye na -eweta teknụzụ na ihe ngwọta ego, taa kwupụtara na ndị enyemaka ya EPlus Technology, inc., EPlus Technology Services, inc. na SLAIT Consulting, LLC emezigharị n'oge na -adịbeghị anya, kwughachi ma dochie ya na nkwekọrịta kredit ha dị na Wells Fargo Commercial Distribution Finance Corporation.
ePlus inc., Onye na -eweta teknụzụ na azịza ego, taa kwupụtara na ndị enyemaka ya ePlus Technology, inc. na SLAIT Consulting, LLC emezigharị n'oge na -adịbeghị anya, kwughachi ma dochie ya na nkwekọrịta kredit ha dị na Wells Fargo Commercial Distribution Finance Corporation.
E guzobere ụlọ ọrụ kredit ọhụrụ ahụ site na otu ụlọ akụ nke CDF na -arụ ọrụ dị ka onye na -ahụ maka nhazi yana mejupụtara ụlọ ọrụ nwere atụmatụ echekwara echekwabara maka ndị na -agbaziri ego na mkpokọta ego ruru nde $ 375, mmụba sitere na $ 275 nde, ọnụ ya na sublimit maka ụlọ ọrụ kredit na -atụgharịgharị ihe ruru nde $ 100.
Nchịkọta ego nke isi dị n'okpuru ụlọ ọrụ kredit ọhụrụ ahụ dabere na ntọala mgbazinye dabere na, n'etiti ihe ndị ọzọ, nnabata na ndekọ ego nke ndị na -agbazinye ego, nke ọ bụla dabere na usoro yana dabere na ihe ụfọdụ. Ụlọ ọrụ kredit ọhụrụ ahụ nwere okwu otu afọ mbụ nke na-emegharị ọhụrụ na-akpaghị aka maka usoro otu afọ ga-esochi; agbanyeghị, otu abụọ nwere ike kwụsị site na ọkwa kwesịrị ekwesị.
Elaine Marion, onye isi ndị ọrụ ego kwuru, "Ụlọ ọrụ akwụmụgwọ a agbazigharịrị na -akwado uto na ọrụ anyị nye ndị ahịa anyị nwere ọnụ ahịa dị ka onye isi na -eweta ihe ngwọta dị elu." “Anyị ji mmekọrịta dị ogologo oge anyị na CDF kpọrọ ihe, ụlọ akụ ọhụrụ anyị, ma nwee ekele maka nkwado na-aga n'ihu eGụnyere. ”